Semalt: Izvo Zvinonyanya Kwazvo SEO Zvishandiso ZveBhizinesi
Makwikwi mumusika we-e-commerce uri kuwedzera, uye kunyange makambani ane simba zvikuru anofanira, nguva nenguva, kuongorora kutaridzika kwavo paInternet.
Nekudaro, kune zvakawanda zvingasarudzwa zvevashandi vanomhanyisa mawebhusaiti emakambani makuru, pamwe neyevice blogger avo vari kutotanga kukwezva vaverengi vatsva.
Kunyangwe iwe watove nyanzvi kana kunyange kutanga, vakwikwidzi vako havamirire. Saka, uve wekutanga kugadzirisa mamiriro ako paInternet: SEO yakakosha kwauri!
Hongu, SEO maitiro akaoma ayo anoda kushandiswa kwemamwe maturusi. Kwemakore mashoma apfuura, Semalt akaisa zvirinani zvekuongorora maturusi ekukudziridza akakodzera SEO mazano emakambani ako. Ramangwana rasvika. Naizvozvo, ita shuwa kuti webhusaiti yako ine chinzvimbo chinotungamira mairi nhasi.
Tsvaga pano zvishandiso zvakanyanya zveSemalt maturusi uye mazano ayo anokubatsira iwe kusimudzira webhusaiti yako mumhando yepamusoro yekutsvaga injini: SERP - ZVIRI MUKATI - GOOGLE WEBMASTERS - PAGE YEMUKADZI
SERP (Tsvaga Yekutsvaga Mhedzisiro Peji)
Chikamu cheSERP chinosanganisira zvishandiso zvekunzwisisika kuwebsite webhusaiti. Tsvaga mazwi akakomberedzwa newebhusaiti yako, tsvaga mapeji ako ekutyaira, uye ona nzvimbo dzawo muzviono zvekutsvaga. Ongorora ako emakwikwi emameter metric kuti aumbe inobudirira kukurudzira chirongwa.
Mazwi akakosha mu TOP
Uyu mushumo unoratidza mazwi ese akakosha ako webhusaiti yako muGoogle zvisikwa zvekutsvaga mhinduro, mapeji akaiswa, uye nzvimbo dzadzo dzeSERP zveimwe rakakosha izwi.
Sanganisira sub-masizinda: iwe unogona kuongorora yako yakakosha dura uye sub-maseru kana kusavanze ivo kuti vawane iyo data yeiyo musimboti wedare chete.
Injini yekutsvaga: Aya ndiwo injini dzekutsvaga dzakatoisa rako webhusaiti kana neshoko rimwe chete. Iyo rondedzero yakarongedzwa mukuburuka kurongeka kwehuwandu hwemashoko akakosha.
Mhedzisiro yacho inokuratidza:
Nhamba yemazwi akakosha mu TOP: Muchikamu chino, iwe unenge uine chati inoratidza huwandu hwemazwi akakosha mu TOP nekufamba kwenguva. Iyo inokubatsira kuti utarise shanduko muhuwandu hwemazwi akakosha ayo webhusaiti anotungamira muGoogle TOP 1-100 organic yekutsvaga mhinduro.
Mazwi akagoverwa ne TOP: Pano, iwe unogona kuwana huwandu hwemashoko akakosha iyo webhusaiti inotungamira muGoogle TOP -1-100 organic yekutsvaga mhinduro, kupokana nezuva rekutanga.
Kugadziriswa nemazwi akakosha: heino tafura iyo inoratidza inonyanya kuzivikanwa mazwi makuru emawebhusaiti mamiriro panzvimbo yeGoogle organic yekutsvaga mhinduro. Iwe unogona kuwana yavo yeSERP nzvimbo yemazuva akasarudzwa uye kuti vakachinja sei, vachipesana nenguva yakapfuura.
Iwe une mukana wekudhonza iyo data iri patafura nenzira dzakasiyana siyana:
Shoko rinokosha kana chikamu charo
URL kana chikamu chayo
Semuenzaniso, unogona kupurinda mapeji ese anotungamira neshoko rakakosha rine izwi rinoti '' tenga '' uye uve nenzvimbo TOP-1 mune zvimiro zvekutsvaga zvakawanikwa.
Iyi tafura inokuratidzawo:
Mazita akakosheswa ayo webhusaiti anotungamira muGoogle zvisikwa zvekutsvaga mhinduro
URL yemapeji akaverengerwa ewebhusaiti yavo uye nzvimbo dzeSERP dzerimwe zita rakakosha.
Iyo webhu peji peji munzvimbo muGoogle TOP yezita rekutarisirwa remberi pazuva rakatarwa.
Nhamba yepakati yekutsvagirwa kwemwedzi nemwedzi kweiyo yakatsvaga mutsara mune injini dzekutsvaga muGoogle.
Muchikamu chino, iwe unowana iwo mapeji anotyaira chikamu chepamusoro chezvipenyu kuwebhusaiti yako. Nyatsotarisisa kwavari: gadzirisa avo pane-peji peji SEO zvikanganiso, wedzera zvakasarudzika zvemukati, uye kukurudzira aya mapeji kuti awane organic traffic kubva kuGoogle kutsvaga. Mukati meizvi, mhedzisiro ichakuratidza:
Mapeji akanakisisa kupfuura nguva: iwe unowana chati inoratidza shanduko muhuwandu hwemapeji ewebhusaiti muGoogle TOP yehupenyu hwese hwekutenderera kweprojekiti. Zvino nekuchinja pachikero, unogona kuona iyo data kwevhiki kana mwedzi.
Misiyano: apa, iwe unogona kuwana huwandu hwemapeji ewebhu muGoogle TOP 1-100 michero yekutsvaga yemichero, kupesana neyakamboitika nguva.
Akasarudzwa mapeji keywords mazwi stats: apa, iyo chati inoratidza shanduko muhuwandu hwemazwi makuru iyo mapeji akasarudzwa akaiswa muGoogle TOP yehupenyu hwese hwekutenderera kweprojekiti.
Muchikamu chino, iwe unowana mawebhusaiti ese muGoogle TOP 1-100 yemashoko akakosha akafanana neako ako webhusaiti renzvimbo. Tsvaga kuti nzvimbo yako webhusaiti inobata sei pakati pevanokwikwidza newe nehuwandu hwemashoko ese akakosha mu TOP-100
Dzidza kana Google ichibata peji rako rewebhu seyakasiyana sosi kana kuti kwete. Pano iwe unokwanisa kutarisa chaiyo yeiyo chikamu chezvinhu zvako zvakasarudzika, tsvaga kuti zvipi zvikamu zvegwaro zvakatsanangurwa, uye tarisa kuburikidza neyakakosha zvinyorwa.
Peji yekubatana kutarisa
Tsvaga kuti Google inobata peji rako rewebhu seyakasarudzika kana kwete. Kunyangwe iwe uine chokwadi chekuti zvawakanyora zvakasiyana, zvinogona kunge zvakapihwa nemumwe munhu. Uye kana imwe pepa rewebhu rine zvako zvirimo zvakanyorwa munguva pfupi kupfuura neyako, Google inozviona seyakanyanya sosi yezvinyorwa, nepo peji rako rewebhu richizonzi rakanyorwa. Ramba uchifunga kuti muzana yakakura yezvinyorwa zvewebhu peji inogona kutungamira kuGoogle zvirango.
Icho chikuru chinangwa chePasirose kusiyanisa cheki
Chinangwa chikuru chePagerise Uniqueness cheki sevhisi kuona zvinhu zvakabiwa nevanokwikwidza, kwavanogona kunyora kuenda, uye saiti yako ichangoita seyakafanana uye havatombotora chinzvimbo chepamusoro.
Iyo yekusimbisa inoitika mumatanho madiki madiki. Kutanga, iwe unoratidza kero yepaiti, mune iyo URL chikamu, ipapo unoratidza kana iwe uchida kuita yako yekunyoreswa pasi rese (google.com (All) - International) kana chete muFrench webhu (google.fr (French) - France), uye ikozvino iwe unotanga kuisimbisa nekudzvanya bhatani CHECK bhatani. Isu tichaongorora uye tinoratidza ese zvikamu.
Ipapo, iwe unogona kutarisa chero chikamu mune imwechete kodha!
Iyo injini yekutsvaga ingangodaro inoona iyi peji seyakasarudzika. Nzvimbo dzewebhu rewebhu rinogona kukura risingakanganiswi paSERP.
Iyo injini yekutsvaga ingangodaro inotarisa zviri pane peji ino kunyora zvakare. Nzvimbo dzepepa rewebhu dzinogona kukura kana, zvirinani, hazvisi kuzora. Kusimudzira peji rako rewebhu, gadzira zvakanyanya rakasiyana uye rinobatsira zvemukati.
Injini yekutsvaga ingangodaro inotarisa zvirimo pane ino peji iri kutaura zvisina kufanira. Iko kukura kwechinzvimbo hazvigoneke. Iwe unofanirwa kutsiva yako yezvino zvemukati neimwe yakasarudzika.
Mushure mezvikamu zvese izvozvo, unogona kuona mumhedzisiro yako zvikamu zviviri zvikuru, zviri:
Zvemukati: Pano, iwe unogona kuwana zvese zvinyorwa izvo Googlebot inoona pane yakapihwa peji rewebhu. Zvikamu zvakapetwa zvemukati zvemukati zvinosimbiswa.
Zvepakutanga zvemukati sosi: Pano, mawebhusaiti ayo Google anobata senge ekutanga zvinyorwa zvezvakapihwa zvakanyorwa mune ino tafura. Zvadaro, unogona kutarisa kuti chikamu chipi chemukati chinowanikwa pane yega yega webhusaiti.
Ziva kuti iwe unogona kusangana nechikwata cheSemalt kune chero mibvunzo pamusoro pemhinduro yekusarongeka kwewebsite yako.
Tonga mawebhusaiti akawanda uchishandisa yedu yekushandisa-inoshamwaridzika interface. Endesa masheya ako kana ma URLs kuGoogle uye tarisa mafambiro awo nyore. Ita shuwa yekugadzira account yeGoogle kuti uwane mukana wekusvika kuGoogle Webmasters chikamu.
Google webmaster ibasa rinoratidza mawebhusaiti ako anoonekwa sei muGoogle tsvaga mhinduro uye inokubatsira kuona zvinhu zve indexing. Pane ino peji rewebhu, unogona kutumira mawebhusaiti ako uye sitemaps senge rizere runyorwa uye wokumbira rondedzero yavo neGoogle.
Chero zvinhu zvine: Svina mhedzisiro ne URL kana chikamu chayo. Iwe unogona kuwana ma URLs ayo ane kana asina izwi rakati pamwe chaiwo neiyo URL mechi.
Aya masetera anoratidza kushanda kwewebhu webhusaiti yako. Iwe unogona kuvaona kune yakatarwa zuva / nguva yenguva uye enzanisa iyo data. Iyi sevhisi inobatsira kuziva yako webhusaiti masimba uye zvikanganiso izvo zvinodzivirira kuti zviverengerwe mu TOP 1
Mukuvhara uku, unogona kuendesa yako sitemaps yewebhu kuGoogle kuti uone kuti ndeipi mapepa akaiswa indexed uye ndeapi ane zvikanganiso. Sarudza dura rekutarisa runyorwa rwemamepu.
Tarisa uone kana mutoro wepeji rako uchienderana nezvinodiwa neGoogle. Pano iwe unopihwa neruzivo nezve zvikanganiso zviripo izvo zvinofanirwa kugadziriswa pamwe nemazano ekuti ungavandudza sei kuita kwako saiti.
Nei kukurumidza kwesaiti kuchikosha?
Iko kumhanya uko iyo webhusaiti mitoro iri chinzvimbo chinzvimbo. Yakareba kurodha nguva yakaipa inokanganisa chinzvimbo mumhedzisiro. Yandex neGoogle zvinoda zviwanikwa zvinokurumidza.
Iyo chaiyo yekumisa nguva ndeye 2-3 masekondi. Yakanakira - mushandisi yekupindura nguva ndeye 0.5 masekondi.
Nhasi, vateereri vazhinji vepamhepo vanoshandisa nharembozha kushanyira nzvimbo. Uye vane zvishoma zvishoma nzira dzekuwana uye zvemukati zviwanikwa pane zvemakomputa pachako.
Wese munhu anoziva kuti nzvimbo inononoka yakaipa. Kana iyo saiti ichiderera nguva nenguva, vashanyi vane matambudziko akakomba ekugadzirisa mabasa avo, uye pamusoro peizvozvo, zvinongotsamwisa.
Asi kunyangwe kana mamiriro acho newebhu webhu ari akajairwa, kunonoka kushoma pakuratidza saiti kunoguma nekurasikirwa kwevateereri uye kuderera kwezinga rekushandura.
Nyanzvi dzezvitoro zvepamhepo dzaona kuti kana iyo yekumhanyisa yekudonhedza yadzika ne100 ms, kutengesa kwavo pakarepo kunodonha ne1%.
Nekudaro, dambudziko rekusimudza kwesaiti rinoda kugadziriswa nekukasira munzira dzinoverengeka.
Uye nechikonzero chakanaka, Semalt akagadzira iyi Yekukurumidza dhizaini yekuongorora kuti uongorore zvese zvinobvira paramita maererano nekumhanya kwenzvimbo uye yakatarwa mapeji: Tsvaga kuti inoshanda sei.
Peji yekumhanya inoongorora
Peji yekumhanya inoongorora inoshandiswa kuita kuti uone kana nguva yekuremerwa yewebhu peji yako inosangana nezvinodiwa zveinjini zveGoogle yekutsvaga. Iyo inotaurawo zvikanganiso zvekugadziriswa uye inouya nekuvandudzwa kunogona kuitwa kukwirisa yako peji rewebhu mutoro nguva.
Mushure mekuongorora, iwe unowana kwete chete chinyorwa chekombiyuta, asiwo yefoni nhare.
Pamhedzisiro imwe neimwe, uchaona:
Peji yekuremerwa nguva: iyo nguva inotora kuti peji riite zvizere.
Kubudirira kuongororwa: Huwandu hwekuongororwa kuti peji rako rewebhu rapfuura rakabudirira.
Kukanganisa kugadzirisa: Kugadzirisa izvi zvikanganiso kuchabatsira rako rewebhu peji kurumidza kukurumidza
NaSemalt, iwe unogona zvakare kukumbira kubvunza pachena uye kuti uone maitiro ekuvandudza webhusaiti yako: